Ise Pụrụ Iche Mejọọ Email Gị Mmemme Mmemme Kwesịrị Zere | Martech Zone
Wednesday, October 29, 2014 Wednesday, October 29, 2014 Amit Khanna kwuru
Na na Ndị ọrụ 222 nde na US naanị, email nwere nnukwu ike dị ka ikpo okwu ahịa. Email bụ ngwa ọrụ dịgasị iche iche enwere ike iji kpoo ihu igwe oyi, soro ndị ahịa dị ugbu a kwurịta okwu ma nwee atụmanya ịchụpụ azụmaahịa ọhụụ.
Ndị ọkachamara n’ire ahịa Email na-aghọta ihe ndị bụ isi, dịka mkpa ọ dị ịkpa nka ekike okwu gbara ọkpụrụkpụ yana gụnyere oku siri ike ime ihe. Mana ọbụna ndị na-ere ahịa email nwere ike ịdaba n'ọnyà nke iji usoro ndị na-adịghị arụ ọrụ ma ọ bụ ọbụlagodi usoro ịre ahịa email nke nwere ike ibute akara ha. Nke a bụ isi mmejọ ise ndị ahịa email na - eme - yana otu ị ga - esi zere ha.
Iji a adreesị ozi-e ọjọọ. Ma ọ bụ zụrụ ma ọ bụ chịkọta oge na-aga n'ime, aha ọjọọ email nwere ike ịkọwa nsogbu. Mmemme ezubere iji gbochie spam ịchọ ojiji nke adreesị ozi-e anaghị arụ ọrụ, ya mere ọtụtụ adreesị oge ochie nwere ike ịnweta ozi ịntanetị nke ụlọ ọrụ gị na ọnyà spam. Mee ezi data ọcha iji hụ na nke a anaghị eme gị.
Ejighi ya nhazi mmeghachi omume. Ihe dị ka 50% nke ozi ịntanetị ka emepere ugbu a na ngwaọrụ mkpanaka, yabụ ọ bụrụ na ịnweghị iji mmeghachi omume na-eme ihe - ọkọlọtọ imepụta nke na-egosipụta ọdịnaya maka ihuenyo ngwaọrụ - ọkara ndị natara gị agaghị enwe ike ịlele email gị na-enweghị mbubata ọdịnaya na ịpịgharị site n'akụkụ ruo n'akụkụ. Ọtụtụ ga-ekpochapụ ozi gị kama.
iji nyiwe nkwukọrịta ndị ahịa maka mkpọsa email. Fọdụ ndị na-ere ahịa email na-azụta ndepụta ma buru ha na nyiwe dịka MailChimp ma ọ bụ ConstantContact, nke a na-emebeghi maka nzube a. N'ezie, ọ na-emebi usoro ọrụ ma nwee ike mechie akaụntụ gị ma debanye aha na ngalaba gị. Jiri a ndu ọdo dị ka Ọrịre kama.
Listszụta ndepụta maka ego dị oke mma. Dịka n'ọtụtụ mpaghara ndị ọzọ nke ndụ, ị nwetara ihe ị kwụrụ, yabụ zụta ndepụta email gị site na isi iyi ama ama. Ọ bụrụ na ị bulie otu na DVD maka $ 100, ọ ga-enwerịrị ịnweta adreesị email nwụrụ anwụ, nke nwere ike ịnweta aha ojii gị. Ndepụta dị ọcha na-efu ego n'ihi na ọ na-ewe ego itinye ego n'ụzọ kwesịrị ekwesị, na-ehicha ma na-echekwa data ahụ.
Adịghị lekwasịrị ndị nnata email. Mgbasa ozi email dị irè na-enyefe onye ziri ezi ozi ziri ezi. Gbaa mbọ hụ na listi email gị ka echere maka igwe mmadụ ị na-achọ iru. A fesa ma kpee ekpere ịbịaru nso nwere ike iyi ka ị na-egwu pasent, mana enwere ọnụahịa dị elu iji zipu ozi-e, yabụ ịlele anya bụ isi ihe ga-eme ka ịga nke ọma.
Enwere ọtụtụ ihe na-abanye na nnukwu mgbasa ozi email. Ihe a na-enye doro anya na ihe dị mkpa. Otú ahụkwa ka ozi dị - site n’ahịrị isiokwu ruo ọkpụkpọ mmechi iji mee ihe. Mana ọ na-ewe karịa naanị ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ na-adọrọ adọrọ na nnomi dị irè iji mepụta mkpọsa mmeri. Nhazi email na ọnọdụ nnyefe dị oke mkpa.
Na data emelitere - adreesị ozi-e ziri ezi na ozi ezubere iche dị ezigbo mkpa. N’ahịa, ọ bụ maka inweta ozi ziri ezi nye onye ziri ezi n’oge kwesịrị ekwesị. Principlekpụrụ a bụ eziokwu na ahịa email. Y’oburu n’inwe ike zere mmeghe ahia email ise a, ị gha n’iru n’iru n’ihu.
Tags: adreesị ozi-e ọjọọịzụta ndepụta emailemehie ozi email dị oke egwuemail emehie emehienyiwe ozi emailnhazi mmeghachi omumenkewaezubere iche
Amit Khanna kwuru